Former Zimbabwe captain Heath Streak banned by ICC for eight years on corruption charges - The Economic Times
Business News›News›Sports›Former Zimbabwe captain Heath Streak banned by ICC for eight years on corruption charges
Reuters Last Updated: Apr 14, 2021, 04:56 PM IST
Heath Streak. (TOI Photo)
Former Zimbabwe captain Heath Streak has been handed an eight-year ban for five breaches of the International Cricket Council's (ICC) anti-corruption code, the governing body said on Wednesday.
The breaches took place during Streak's role as coach of Zimbabwe and various domestic teams, the ICC said in a statement.
"Under the provisions of the Code, Mr. Streak chose to admit the charges and agreed the sanction with the ICC in lieu of an Anti-Corruption Tribunal hearing," the governing body said.
Streak, 47, played 65 Tests and 189 one-day internationals for Zimbabwe between 1993-2005.
Heath StreakInternational cricket councilFormer Zimbabwe captain